Filtrer les éléments par date : mardi, 27 juillet 2021
mardi, 27 juillet 2021 16:19
CFM : Tsy manaiky ny herisetra sy fifofoana ny aina
Jirama : Tsy afaka nandray antso ny laharana maitso
mardi, 27 juillet 2021 10:37
Antoko UNDD : “Tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana”
Manameloka ny fikasana hifofo ny ain'ny Filohan'ny Repoblika ny antoko UNDD, tamin'ny alalan'ny Filoha Nasionaly Manoro Régis sy ireo mpitarika ny antoko tamin’ny fanambarana nataon’izy ireo ny alatsinainy 26 jolay.
Tsy soatoavina malagasy ny fifofoana aina, indrindra ny Filohan'ny Repoblika izay Ray aman-drenin'ny firenena ka manameloka tanteraka izany ny UNDD, hoy ny fanambarana.
Manamafy ny antoko UNDD fa tsy vahaolana ao anatin'izao fahasahiranana mihatra maneran-tany izao ny fanonganam-panjakana.
mardi, 27 juillet 2021 10:28
Tafika Malagasy : Miaro hatrany ny fiandrianam-pirenena sy ny safidim-bahoaka
Namory ny Lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika sy ireo Lehiben'ny Etamazaoron'ny telo, miaraka amin'ireo mpiasa rehetra eto anivon'ny Ministera sy ny Etamazaoro, ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Richard, ny alatsinainy 26 jolay maraina, teo Ampahibe.
Nandritra izany no nanomezany baiko sy toromarika amin'ny fametrahana ny paikady rehetra entina miady, manoloana ny fikasana hifofo ny ain'ny Filohan'ny Repoblika.
Nanamafy ny tenany fa miaro hatrany ny fiandrianam-pirenena sy ny safidim-bahoaka ny Foloalindahy ny Tafika.
Nampitandriana ihany koa izy ho an'ireo miaramila amperin'asa mba tsy ho alaim-panahy hiray petsapetsa amin'ny teti-dratsy toy izany.
mardi, 27 juillet 2021 10:02
Mananara Avaratra : Maty teo ampanaovana adina ara-panatanjahantena ilay tovolahy hiatrika bakalorea
Tovolahy iray no nindaosin’ny fahafatesana omaly 26 jolay 2021, teo ampanaovana adina ara-panatanjahantena.
Mpianatry ny Lycée Mananara Avaratra, Cisco Mananara Avaratra, DREN Analanjirofo ilay tovolahy, kandida hiatrika adina an-tsoratra amin’ny fanadinana bakalorea sokajy D hatao manomboka amin’ny alatsinainy 9 aogositra ho avy izao.
mardi, 27 juillet 2021 09:07
Le fonio est une céréale originaire d'Afrique.